juillet 2021 – Madatopinfo
VOKATRA VITA MALAGASY: Hitohy hatramin’ny 31 jolay ho avy izao ny tsenaben’ny sakafo
« Manandratra ny vita malagasy », io no lohahevitra nosafidian’ny mpikarakara, Chez’Elles Madagascar mandritra ny hetsika tsenaben’ny sakafo izay tanterahina eny amin’ny zaridaina Antaninarenina ny 28 hatramin’ny 31 jolay hoavy izao. Fotoana
Miandrandra fanatanterahana ara-bakiteny ireo nampanantenain’ny Fitondrana izay mijoro ny olompirenena. Heverina fa tsy fialana bala ny valan’aretina. Mifanohitra tanteraka tamin’ny nofinofy mialohan’ny fifidianana ho Filoham-pirenena farany teo no zava-misy. Moa
Anisan’ny mampitaraina ny mpajifa ny fahalafosan’ireny vokatra asa tanana vita malagasy ireny ka mahatonga ny olona hirona kokoa amin’ny vita vahiny toy ny poketra, kapa na kiraro, akanjo sy ny
ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR: Benja Arson no handimby an’i Josie Randriambeloma
Mankalaza ny faha-10 taona nijoroany amin’ity 2021 ity ny Orange Solidarité Madagascar izay notarihan’i Josie Randriambeloma. Tsy tambo isaina ireo zava-bita nandritra izay taona maro izay raha tsy hilaza afa-tsy
“Io no maridrefy tena Tsara, Radio Madagasikara”. Io fehezan-teny io no nampisaloran’ny Radio Madagasikara na ny RNM ny faha 90
Taoriana’ny fahatsapan’ny tompon’andraikitra ny fahalafosan’ ireo lamba fampiasa amin’ny fandidiana na “linge opératoire à lavage unique” ao amin’ny CHUJRA izay
OSCIE: Mila hentitra ny fitondram-panjakana eo amin’ny fintantanana ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany
Amin’ny maha Fiarahamonin-pirenena misehatra manokana momba ny fanatsarana ny fitananana ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika eto Madagasikara ny
Tsy vitsy ireo mitaky ny fampidirana ny kodiaran-droa ho fitanteram-bahoaka eken’ny fitondrana eto an-drenivohitra. Maro ny fitaovam-pitanterana eto Madagasikara,ary efa
Mila fanohanana ny Autisme eto Madagasikara. Notanterahana ny talata 13 Jolay lasa teo ny fifanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa teo amin’ny Filohan’ny